Maamulka Cusbitaalka kaaraamardha oo sheegay in uu sii labajibaaray dadaalada ku aadan kahaqabtirida shacabka ee dhanka adeega caafimaadka - Cakaara News
Maamulka Cusbitaalka kaaraamardha oo sheegay in uu sii labajibaaray dadaalada ku aadan kahaqabtirida shacabka ee dhanka adeega caafimaadka
Jigjiga(CN) Talaado Feb-10-2015.Maareeyaha cusbitaalka kaaraamardha ee magaalada jijga Dr Maxamed Axmed maxamed oo u xafiiskiisa ugu waramay shabakada wararka ee cakaaraNews ayaa u gawarbixiyay xaalada guud ee cusbitalka kaaraamardha iyo adeega caafimaad ee uu siiyo bulshada.
Haddaba maareeyaha ayaa sheega in ay dadaalo xoogan ugujiraan sidii ay uga haqabtiri lahayeen shacabka adeega caafimaad ee ay ubaahanyihiin oo hufan iyada oo cisbitaalka uu shacabka adeegyada ay u hayeen loo gudaray in hooyada dhalaysa looga dhalinayo looguna shaqaynayo lacag alaan ayadoo lagaduulayo in ay hooyo udhiman fool iyo dhalmada.
Maareeyaha cusbitaalka kaaraamardha ee magaalada jijiga oo hadalkiisa sii wata ayaa intaa kudaray in qaybaha kaladuwan ee cusbitalka haysto qalabyada ka duwan ee bukaanada lagu daweeyo oo casriyo islamarkaana tayo aad u saraysa leh lana jaan qaadaya qalabyada yaala cusbitaalada caalamka sidoo kale anbalaasyo iyo dhakhaatiir kufilan iyadoona qayb walbana lagu sameeyay balaarin.
Ugudanbayn ayuu maareeyuhu waxa uu sheegay in ay shacabka siiyaan wacyigalin latalin ku aadan dhanka caafimaadka maadaama uu yahay qorshaha la qaatay daawaynta cudurada in muhiimada la siiyo ka hortaga iyo xakamaynta cudurada faafa.
Cusbitaalka kaaraamardha ee magaalada jijiga ayaa ah cusbitaal balaadhan oo lagu daweeyo shacab aad u badan oo isugu jira bukaanjiif iyo bukaan socod siiyana hooyada iyo dhalaanka adeeg caafimaad tayo sare lehloogana maarmay cusbitaalada dibada.
Dhanka kalana shcabka kudhaqan DDSI ayaa soo dhaweeyay adeegyada caafimaad ee cusbitaalka usiiyo.